Zimbabwe: Don't Donate Towards Lavish Mugabe Birthday Bash, Zimbabweans Urged - allAfrica.com
Zimbabwe: Don't Donate Towards Lavish Mugabe Birthday Bash, Zimbabweans Urged
Zimbabwe opposition parties have called on ordinary Zimbabweans not to be coerced into donating towards President Robert Mugabe's 92nd birthday party to be held in Masvingo next month, according to a report.
Organisers of the nonagenarian's birthday this year reportedly have to raise at least $800 000 for the celebration at Mucheke Stadium on February 28, with the drought hit Masvingo province expected to raise at least $100 000, the reports said.
The organisers, the February 21 movement - a group established in 1986 to encourage Zimbabwean youths to emulate Mugabe's "selfless character and leadership qualities" - promised to pull all stops to make the celebrations the biggest of them all.
Rugare Gumbo, a former Zanu-PF spokesperson now linked to the Peoples First movement, blasted the initiative of raising cash for Mugabe's birthday bash, saying the money could be used to feed thousands of villagers affected by the dry season instead.
Zimbabwe is reportedly facing widespread food shortages, with the situation said to be critical in the country's rural areas, following a particularly harsh dry season.
Mugabe Opponents Plan Big March on Saturday
Several major world powers and even members of the president's party have indicated they would like to see President… Read more »